Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailand » Tsy maintsy mijanona ny fanidiana any Thailandy mampijaly, mitomany ireo mpandraharaha
Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • Safety • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Septambra 3, 2021
Ny PM dia miantso ny hidin-trano any Thailand
Ny Ivotoerana Thailand'ny COVID-19 Fitantanana ny toe-javatra dia nanalefaka ny fifehezana aretina tamin'ny Alarobia 1 septambra 2021, ny fanidiana hidin'i Thailand.
Ny fanidiana hidin'i Thailand amin'izao fotoana izao dia misy ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny 9 hariva ka hatramin'ny 4 maraina any amin'ny faritany “mena mainty”.
Mangataka ny orinasa Thai mba hitsahatra avy hatrany ny fanidiana sy ny fizarana vaksininy amin'ny fomba mandaitra kokoa.
Iray volana mahery izao no nijanonan'ny orinasa ary nanatanteraka fepetra henjana amin'ny fifehezana aretina amin'ny ezaka hialana amin'ny fanidiana ho avy.
Ny praiminisitra Thailandy Prayut Chan-o-cha dia nilaza fa ny ora tsy azo atao amin'ny 9 ora hariva ka hatramin'ny 00:4 maraina ao amin'ny 00 COVID-29 Faritany "mena mainty", ao anatin'izany ny Tanànan'i Pattaya sy Bangkok, dia azo hafoina na hatsangana, arakaraka ny toe-javatra COVID-19.
Nilaza izy fa na dia nanamaivana ny fifehezana aretina aza ny Center for COVID-19 Situation Administration tamin'ny Alarobia, dia manantena izy fa hitandrina hatrany ny tsirairay. Mety hihalefaka kokoa ny fameperana raha mihatsara ny toe-javatra.
Jeneraly Prayut dia nilaza fa ny fihenan'ny curfew na ny fampiakarana azy dia hiankina amin'ny isan'ny aretina, ny fahafatesan'ny olona ary ny metrika hafa mifandraika amin'ny areti-mandringana.
Nilaza ny praiminisitra fa fantany fa misy fiatraikany amin'ny toeram-pialamboly ny tsy fahazoana mivezivezy, ary ny fikambanana misolo tena ny tompona trano fisotroana fisotroana, fisotroana misy azy ary toerana hafa amin'ny alina dia te-hiresaka momba ny fanalana fetra bebe kokoa amin'ny CCSA, saingy miahiahy momba ny olona mirohondrohona hatrany amin'ireo toerana ireo izy.
Mangataka ny hijanonan'ny fanidiana hidina avy hatrany ny orinasa Thai
Orinasa marobe no manana fanantenana aorian'ny andro voalohany nisokafan'ny alarobia, taorian'ny fanakatonana iray volana mahery niaraka tamin'ny fepetra fanidiana. Orinasa maro no mampihatra fepetra henjana amin'ny fanaraha-maso aretina mba hialana amin'ny fanidiana hafa amin'ny ho avy, raha misy komity iraisana kosa nangataka tamin'ny governemanta mba tsy hanambara intsony ny fanidiana.
Ny komity iraisan'ny komity iraisan'ny varotra, ny indostria ary ny banky (JSCCIB) dia nangataka tamin'ny governemanta mba tsy hametraka fepetra fanidiana intsony ho valin'ny COVID-19, fa kosa hifantoka bebe kokoa amin'ny fizarana vaksinina mahomby sy fifandraisana mangarahara amin'ny sarambabem-bahoaka.
Ny filohan'ny JSCCIB, Payong Srivanich, dia nilaza fa ny fepetra fanidiana natao nandritra ny iray volana mahery dia tsy nitondra fihenan'ny isan'ny COVID-19 vaovao caces, fa kosa niteraka fahasimbana mitohy amin'ny toekarena.
Toy izany koa, ny filohan'ny Federasionan'ny indostria Thai (FTI), Suphan Mongkolsuthee, dia nilaza fa ny governemanta dia tsy tokony hamerina ny fepetra fanidiana, milaza fa ny tahan'ny fandrakofana vaksiny dia tokony hahatratra 70% -n'ny mponina izao, raha afaka mahavita ny famitana izany ny governemanta. kendrena.
Niverina velona indray ny toeram-pivarotana maro izay nilaozana nandritra ny fanidiana hidy omaly, satria fivarotana sy trano fisakafoanana maro no avela hisokatra izao.
Ao amin'ny MBK Center ao Bangkok, mpivarotra maro no nanokatra ny fivarotany miaraka amin'ny fepetra henjana momba ny fahasalamana sy fiarovana. Ny tribon-tsakafo any dia efa vonona tanteraka amin'ny asa fanompoana miaraka amin'ny ankamaroan'ny mpiasa vita vaksiny tanteraka. MBK Center, fantatra ihany koa amin'ny hoe Mahboonkrong, dia toeram-pivarotana lehibe misy rihana 9 any Bangkok miaraka amin'ny fivarotana, trano fisakafoanana ary toeram-pivarotana 2,000 eo ho eo.
Ny tsenan'ny trano marani-tsaina eran-tany dia mitombo hatramin'ny $ 137.9 lavitrisa amin'ny ...